Inqaku leRedmi 8 Pro iya kuthengiswa eSpain ngokusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Inqaku leRedmi 8 Pro lisungulwe ngokusemthethweni eSpain
Inqaku leRedmi 8 laziswa ekuqaleni kuka-Agasti, ezinje ngokuhlaziywa kodidi oluphakathi lwegama lesiTshayina. Imodeli enamandla kakhulu kuloluhlu yi-Redmi Note 8 Pro, Ema ngaphandle kwiikhamera zayo zangemva ezine. Ukongeza, eyona sensor iphambili yi-64 MP, ifowuni yesibini kwintengiso yokusebenzisa le sensor. Emva kweeveki ngamahemuhemu, le modeli ifika eSpain.
UXiaomi ubhengeze konke iinkcukacha zokuphehlelelwa kweRedmi Qaphela 8 Pro eSpain. Kubasebenzisi abanomdla wokuthenga olu luhlu lwaphakathi kwebrendi, ukulinda kufutshane kule meko. Ukwaziswa ngokuqinisekileyo ababelindile.
Iyakuba yile veki xa ifowuni izakuthengiswa. NgoSeptemba 26, inguqulelo yeRedmi Qaphela 8 Pro ene6 / 64 GB isungulwe njengoko inkampani ibhengezile. Le nguqulo yesixhobo Isungulwe ngexabiso lama-euro angama-229 kwintengiso. Ekugqibeleni ixabiso liqinisekisiwe Emva kweeveki ngamarhe
Kwelinye icala sifumana ingxelo yefowuni ene-6/128 GB. Kule meko, iyakwaziswa ngoSeptemba 30 kwivenkile yakho nakwiAmazon, Ngexabiso lokuthengisa lama-euro angama-269, njengoko sele beqinisekisile ngokusuka kwiXiaomi ngokusemthethweni. Ukulinda kufutshane.
Ukuphehlelelwa komdla, kuba le Redmi Qaphela 8 Pro Enye yeemodeli ezibalaseleyo zebrendi phakathi kuluhlu oluphakathi. Uninzi lwalulindele ukuba luzakwaziswa eSpain kungekudala. Kule veki kuya kuba nakho ukuyithenga kwilizwe lethu.
Ngoku ukumiliselwa kweRedmi Qaphela 8 Pro kuqinisekisiwe, nangona okwangoku asazi akukho nto malunga nokuqaliswa kwemodeli eqhelekileyo Kwilizwe lethu. Ke sinethemba lokufumana ulwazi malunga nayo kungekudala. Ucinga ntoni malunga nokuqaliswa koluhlu lwaphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 8 Pro lisungulwe ngokusemthethweni eSpain
I-Google Play Pass ngoku isemthethweni: imidlalo engama-350 ye- $ 4,99 ngenyanga
Ungayithintela njani iakhawunti yakho ye-WhatsApp ekubeni ibiwe njengo-Albert Rivera